Olden Lake | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Posts Tagged "Olden Lake"	8
Norway ရဲ့ Olden Lake ဆိုတဲ့ နတ်ရေကန်
Comments By PostComment မှာ လူစည်ချင်ရင် (ယတြာ) - ခင် ခ - ko pauk mandalay``ဒေဝေါကြီး လာမှာစိုးတယ်´´ - weiwei - ခင် ခ``ရွာထဲမှာ ဆုံကြတာပေါ့´´ - Myo Thant - weiwei၄ လရှည်ကြာ ရွာထဲမှာ - ခင် ခ - Myo Thantအမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - ရွှေတိုက်စိုး - Mလုလင်လူစွန့်စားမြင့်ကျော်နှင့် ခေါင်းပြတ်နတ်ရုပ်တု (စ/ဆုံး) - ရာမည - မောင် ပေနံရိုးကြံမဆိုင် မြီးရှေ easy cook - weiwei - Miss Crystallineအိပ်မက်မင်းသမီး - သူကလေး - Myo Thantမောင်ပေ ရဲ့ ပုံတိုပတ်စများ - မောင် ပေ - kyeemiteသဂျီးနောက်ကနေ ဘယ်သူထိုး who? - မောင် ပေ - TNAသူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား - kyeemite - ဦးကြောင်ကြီးနားစွန် နားဖျား ရပ်ကွက်...။ - kai - kyeemiteငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - သူကလေး - Mobile13တောင်းပန်အပ်ပါသည်။ -etone - သူကလေးကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သော ကျတ်တို့ဌာနီ - kyeemite - Miss Crystallineကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေက ရတဲ့ အတွေး - သူကလေး - Mr. MarGaမြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - kyeemite - ဦးကြောင်ကြီးအတိတ်က ခြေရာတွေပြန်ကြည့်ရအောင် - ဦးကြောင်ကြီး - kyeemiteရပ်ကွက်မှသည် နိုင်ငံဆီသို. - ရွှေတိုက်စိုး - kaiသို့ ချစ်သောဖေဖေ - Myo Thant - uncle gyiသမ္မတကြီး ဦးကြောင် အိမ်သာview - Miss Crystalline - မောင် ပေbin bo..........(ဘင်ဘို) - Aung Myat Lin - uncle gyiအထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - Foreign Resident - Mobile13ရထား ထွက်တော့ မယ် - Mobile13 - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးအဟံ ပထမံ - padonmar - kaiCongress - ရာမည - ရာမညကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - Silver Twig - လုံမလေးမွန်မွန်East West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities